ढाँचा "काग खुट्टा" crochet: plaid लागि सम्भव डिजाइन को योजना र वर्णन
अक्सर प्रयोग Needlewoman मा उत्पादन ढाँचा "काग खुट्टा" (हुक), क्षेत्रीय एकदम सरल छ। जब यो ढाँचा प्यारा प्राप्त छ। तसर्थ, यो अक्सर प्रयोग गरिन्छ छोराछोरीको उत्पादनहरूमा। उदाहरणका लागि, जब गलीचा बुनाई वा कम्बल।
"काग खुट्टा" तल देखाइएको छ सर्किट जो हुक, को ढाँचा संगत गर्न, तलको चित्रमा निर्देशनहरू पालना गर्न आवश्यक छ। क्षेत्रीय पढ्न सक्नुहुन्छ नगर्ने ती लागि, निम्न विवरण राख्न।
एक श्रृंखला डायल। लूपहरूको यसलाई द्वारा 10, र अर्को विभाजित छ यस्तो एउटा राशि हुनुपर्छ। पहिलो पङ्क्ति: स्तम्भ SC (hereinafter "स्तम्भ दर्पण") बाट3पाश,4ब्रेक लुपमा9स्तम्भहरू दर्पण airbag। लामो कुनै श्रृंखला Inlaid5लूपहरूको हुनेछ रूपमा लागि बुनाई9स्तम्भहरू र एक हावा पाश दोहोर्याउनुहोस्। त्यसपछि तिनीहरूले पाँच स्तम्भहरू दर्पण पूरा गर्न आवश्यक हुनेछ।
जारी अत्यन्तै सरल सर्किट, दोस्रो पङ्क्ति3को यस्तो तत्व हो जो ढाँचा "काग खुट्टा" हुक, एयर, दर्पण2स्तम्भहरू, airbag, एक स्तम्भ दर्पण airbag। त्यसपछि लामो त्यहाँ अघिल्लो पङ्क्ति अन्तिम पाँच स्तम्भहरू हुनेछ रूपमा बारम्बार हुनुपर्छ जो तालमेल, सुरु हुन्छ। तालमेल, columnar दर्पण हावा पाश हुन्छन् पाँचवटा स्तम्भहरू दर्पण हावा, हावा र लुपमा अर्को स्तम्भ। पछिल्लो पाँच लूपहरूको मा कार्यान्वयन गर्न: दर्पण स्तम्भ, हावा पाश, एक स्तम्भ3दर्पण।
तेस्रो पङ्क्ति नमुना लागि रूपरेखा पूरा। यो दर्पण को एक स्तम्भ र एक हावा पाश, र तीन उठाने लूपहरूको फेरि एक श्रृंखला सुरु गर्न आवश्यकता एकान्तरण हुन्छन्।
यहाँ यार्न को रंग बदल्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले ढाँचा "काग खुट्टा" (हुक) स्पष्ट देखिने छ। निम्नानुसार चौथो पङ्क्ति योजना छ:6हावा, रसीला स्तम्भ पहिलो हावा अघिल्लो पङ्क्ति को, दोस्रो पङ्क्ति को पहिलो हावा को थप एक रसीला स्तम्भ (तीन स्तम्भहरू दर्पण को निर्वाचकगण), तेस्रो रसीला पहिलो पङ्क्तिको हावा लुपमा हुनेछ, चौथो रसीला स्तम्भ फेरि दोस्रो बुना छ पङ्क्ति र अन्तिम - माथि। योजना यस्तो रसीला स्तम्भहरू पङ्क्ति को अन्त गर्न बुनना गर्न आवश्यक छ। अघिल्लो पंक्ति नयाँ शीर्ष मा मानिन्छ तीन हावा लूपहरूको र दर्पण स्तम्भ पूरा गर्नुहोस्।
त्यसपछि ढाँचा पहिलो पङ्क्ति बाट दोहोर्याइएको छ। तिनीहरूलाई को पहिलो तीन भव्य स्तम्भहरू संग पङ्क्ति जस्तै रंग मा बुनना गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि मुद्दा फेरि परिवर्तन। तर यो ढाँचा समाधान को रंग भिन्न गर्न सम्भव छ। अन्य रंग - उदाहरणका लागि, तीन पङ्क्तिहरू को आधार नै रंग र भव्य स्तम्भहरू संग प्रत्येक पङ्क्ति गर्न।
म यो ढाँचा कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
पहिलो, आधार उचाइ अनुमति छ परिवर्तन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि यो पहिलो दुई पङ्क्ति बाहिर गर्न। त्यसपछि ट्याबहरू फ्लफी र विभाजित स्तम्भहरू व्यापक खाली SN तीन स्तम्भहरू द्वारा गठन गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं "खुट्टा" अझै पनि आपसमा अर्को थिए चाहनुहुन्छ भने, अर्को तालमेल गर्न, छ, तत्व बीच दूरी कम गर्न आवश्यक छैन। एक पूर्ण बिभिन्न plaid (हुक) प्राप्त, "काग खुट्टा" को दर्पण-पोस्टर गर्न सम्बन्धित जो छैन, र तिनीहरूलाई नै, तर sc वा polustolbikah बिना।
सिफारिस बुनाई रसीला स्तम्भहरू
सबै बारहरू यसको उचाइ मा फरक पङ्क्ति बाट आएको हो। तसर्थ, हेरविचार यार्न कस छैन लग्नु गर्नुपर्छ। अन्यथा तस्वीर लापरवाहीसंग बाहिर बारी हुनेछ। त्यसपछि तिनीहरूले वेब बाहिर प्राप्त हुनेछ किनभने तर, छोड्न लुपमा निःशुल्क गर्न धेरै आवश्यक छैन। सौन्दर्य पनि हुने छैन। को रसीला स्तम्भहरू पनि एक सुई कुन फ्लिप सबै तत्व प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पंक्तिबद्ध।
को कम्बल प्रकाश र वायुमय गरिएका भनेर कसरी "काग खुट्टा" हुक बुनना गर्न? यसो गर्न, तपाईं फरक योजना प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
एक पुण 8 लूपहरूको समावेश हुनेछ। तसर्थ, माला रचना 8, प्लस थप एक द्वारा divisible हुनुपर्छ। पहिलो श्रृंखला दुई हावा लूपहरूको साथ सुरु हुन्छ। त्यसपछि तपाईं श्रृंखला को5औं लुपमा दर्पण को पाँच स्तम्भहरु को एक प्रशंसक संगत गर्न आवश्यक, यो तालमेल को शुरुवात हुनेछ। SC स्तम्भ (को "स्तम्भ BN") को प्रशंसक, एक हावा को 4th मा बिना हावा हुन काम र छोड्न तीन चेन दोहोर्याउन जारी। त्यसपछि अर्को मुक्त पाश मा प्रशंसक सबै दोहोर्याउनुहोस्। स्तम्भ BN एक नम्बर पूरा गर्नु पर्छ।
दोस्रो पङ्क्तिमा, पहिलो5उठाने लागि प्रयोग गरिन्छ3जो लूपहरूको, प्रदर्शन। प्रशंसक को बीचमा स्तम्भ मा नम्बर BN जारी (यसलाई "काग खुट्टा" पछि छ), र एक स्तम्भ दर्पण BN अघिल्लो पङ्क्तिमा दुई हावा स्तम्भ। त्यसपछि थप दुई हावा र फेरि स्तम्भ BN "खुट्टा" गर्न। यो पङ्क्ति को अन्त गर्न स्तम्भहरू यस बैकल्पिक जारी गर्न आवश्यक छ।
नमुना तेस्रो पङ्क्ति, तीन उठाने दर्पण जो देखि उठाने प्रदर्शन थियो नै पाश, दुई स्तम्भहरू loops। त्यसपछि एक हावा स्तम्भ र अघिल्लो पङ्क्ति, अर्को airbag र स्तम्भ दर्पण को शीर्ष मा एक प्रशंसक को नै तत्व गर्न BN। ढाँचा पङ्क्ति, पूर्ण जो प्रशंसक को आधा, छ, तीन स्तम्भहरू दर्पण को अन्त जारी।
चौथो पङ्क्ति मा, प्रशंसक माथि तीन हावा पाश, को दर्पण स्तम्भ BN एक स्तम्भ, दुई हावा बार र BN बाँध। पङ्क्ति को अन्त गर्न यो एकान्तरण स्तम्भहरू जारी। त्यसपछि ढाँचा पहिलो पङ्क्ति बाट दोहोर्याइएको छ।
Crocheted बालिका लागि बुनना बोलेरो
प्लास्टिक बोतल को मौरी: सौन्दर्य सिर्जना
ओरिगेमी को कला र बोर्ड को विमान मा एक कागज विमान कसरी बनाउने, एक slingshot प्रयोग सुरु
श्रम ग्यारेन्टी: उत्तरी भत्ता, सुदूर भत्ता, युवा भत्ता
गेस्ट हाउस "भिक्टोरिया", एडलर: सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
सबैभन्दा फैशनेबलको लागि डिजाइनर कपडा
"भव्य शताब्दी" फिलिम रूपमा। अभिनेता, निर्देशक, दृश्यहरु
व्यापार: आभूषण किन्न कसरी राम्रो